သတင်း - အားသွင်းသေနတ်နှင့်အတူ OBC အားသွင်းကိရိယာ
ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း မြန်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်ကားကိုဝယ်သောအခါ၊ အိမ်တွင်အားသွင်းလိုပါက၊ လျှပ်စစ်ကားသည် သင့်အိမ်နံရံတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်အားသွင်းသေနတ် (အခမဲ့မဟုတ်ပါ) ကိုစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရှိနေတာကြောင့်ပါ။အားသွင်းစခန်းများစွာ သင့်ကားကို အလွယ်တကူ အားသွင်းနိုင်စေရန်အတွက် ပြင်ပတွင်၊ ၎င်းသည် စက်မှုအားသွင်းစနစ်ဖြစ်ပြီး ဗို့အားသည် များသောအားဖြင့် ဗို့အားထောင်ပေါင်းများစွာအထက်တွင် ရှိနေပါသည်။
သို့သော် ဤအမြန်နှုန်းနိမ့်ကားအားသွင်းသည့်ဖြေရှင်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ မြန်နှုန်းနိမ့်ယာဉ်များအများအပြားကြားတွင် အများအားဖြင့် အဆို တင်သွင်းခဲ့သည်။110-220VAC၎င်းတို့ကို အိမ် သို့မဟုတ် ရုံးအလုပ်ဌာနတွင် အလွယ်တကူ ကောက်ခံနိုင်သည်။ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို လူအများစုက သိကြပါတယ်။LSVပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြင်မှာရှိနေချိန်မှာ ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ၊ သင့်ဘက်ထရီတွေက အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါသလား။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းလို့ရတယ်။ DCNE. ဝယ်ယူသူလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသွင်းကိရိယာများသည် အားသွင်းသေနတ်ကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Input connector2ခုရှိပါတယ်၊ တစ်ခုအတွက်ပါ။110-220VACအားသွင်းသေနတ်အတွက် တစ်ခု၊ CC/CP ချိတ်ဆက်ခြင်း။ သင့်ကားကို အလွယ်တကူ အားသွင်းနိုင်သည့် အားသွင်းစခန်းရှိသည့် တံခါးအပြင်ဘက်တွင် ရှိနေသောအခါ။ သူတိုIP67 စံနှုန်း၊ ရေ/ဖုန်မှုန့်/ပေါက်ကွဲစေတတ်သော/ရှော့ခ်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ စမတ်အားသွင်းမှု၊ ညွှန်ပြချက် ရရှိနိုင်သည်၊ အလိုအလျောက်ပိတ်အားအပြည့်သွင်းတဲ့အခါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အိမ်မှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
DCNEမြန်နှုန်းမြင့်ကားများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း၊ မတူညီသောဘက်ထရီဗို့အားရှိသည့်ကား မတူညီသော်လည်း အားသွင်းစခန်း၏ဗို့အားမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး အားသွင်းစခန်း၏ဗို့အားကို ဘေးကင်းသောအကွာအဝေးတွင် ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် သင့်ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ မြင့်မားသောဗို့အားသည် သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုစေသည်၊ အောက်ဗို့အားသည် သင့်ဘက်ထရီများကို အပြည့်အဝ အားမသွင်းနိုင်ပါ။ နောင်ကာလတွင် ပျက်စီးလိမ့်မည်။
DCNE သည် one-one chargeဘက်ထရီတစ်လုံးမှ အားသွင်းကြိုးတစ်ခု။ သင့်ဘက်ထရီအရ အားသွင်းဗို့အားကို သတ်မှတ်ပါက ၎င်းကို ယှဉ်ပြီး အားသွင်းပါ။ ဒီလုပ်ရပ်ကို လုပ်မှာပါ။သင်၏ဘက်ထရီများကိုကာကွယ်ပါ။အများအားဖြင့်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဘက္ထရီတွေက ဈေးကြီးလို့ ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။မှန်ကန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားသွင်းကိရိယာ.
မကြာမီ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။